Jowhar.com : Somali Leader News - News: Maamulka gobolka Hiiraan oo ku baaqay in gargaar la gaarsiiyo degmada Buuloburde
April 24 2014 11:57:20
Maamulka gobolka Hiiraan oo ku baaqay in gargaar la gaarsiiyo degmada Buuloburde
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo ayaa ugu baaqay hay�adaha samafalka inay gargaar la soo gaaraan dadka ku nool degmada Buuloburde ee gobolka Hiiraan. Cabdi Faarax Laqanyo ayaa sheegay in xaalada amaan ee degmada Buuloburde ay wanaagsan tahay isla markaana dadka ay si tartiib tartiib ah dib nolosha ugu soo noqonayso kadib shan sano oo ay gacanta ku hayeen ururka Alshabaab.
Ciidamo isbahaysi ah oo ka kooban ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ciidamada nabadilaalinta Jabuuti iyo Ethiopia ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada Buuloburde kadib markii dagaal muddo kooban socday uu ka dhacay duleedka degmada Buuloburde.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale sheegay in ay kala wareegi doonaan degmooyinka ka haray gobolka Hiiraan ee weli ku jira gacanta ururka Alshabaab. Dadweyne badan ayaa ka barakacay degmada Buuloburde iyadoo dadkaasina aysan helin wax kaalmo ah waxaana dadkaasi ay gaareen deegaano ku yaal hareeraha degmada Buuloburde iyadoo weliba kuleyl daran uu ka jiro inta badan gobolada dalka Soomaaliya.
0 Comments · 458 Reads
Jowhar.com744,302 unique visits